सेल झिल्ली एक होइन? संरचना र सेल झिल्ली को समारोह
nadmembrannym परिसर द्वारा बोट कक्षहरू, Fungi र केही जीवाणुहरु आफ्नो पर्खाल जस्ता संरचना लागू हुन्छ। यस लेखमा जीव विभिन्न समूह मा सेल पर्खाल संरचना छलफल गर्नेछन्, र पनि कार्य यो कार्य स्पष्ट। ज्ञात छ, यो घटक पहिलो अंग्रेजी वैज्ञानिक द्वारा पत्ता थियो रबर्ट Hooke को 17 औं शताब्दीमा। सेल झिल्ली एकल-celled जनावर, र अनुपस्थित छ पनि नोट multicellular जीव, माछा, amphibians, सरीसृप, चरा र स्तनधारी: coelenterates देखि र vertebrates संग समाप्त हुन्छ।
तपाईं किन आवश्यक
को फंगल पर्खाल, बिरुवाहरु र drobyanok को संरचना र रासायनिक संरचना भिन्न भन्ने तथ्यलाई बावजुद, सेल झिल्ली समारोह तिनीहरूले धेरै समान छन्। सबै को पहिलो, यो cytoplasm र पर्यावरण कारक को हानिकारक प्रभावबाट यसको organelles को सुरक्षा हो।
अर्को: nadmembranny जटिल एक विश्वसनीय समर्थन सम्पर्क छ र बिरुवाहरु र Fungi को Tissues मा बल प्रदान गर्दछ। तल हामी विस्तृत छलफल हुनेछ खोल संरचना यो कार्य कि कार्यहरु संग परस्पर कसरी।
बिरुवाहरु को सेल पर्खाल सुविधाहरू
सेलूलोज - बोट जीव यो संरचना polysaccharides को कक्षा स्वामित्वको एक बहुलक को अनिवार्य हुन्छन्। यसको आणविक सूत्र तरकारी स्टार्च (सी6घन्टा 10 हे 5) N को कि जस्तै हो। polysaccharide को Macromolecules समावेश बिटा ग्लुकोज को अवशेष, र केवल एक रैखिक संरचना छ, त्यसैले तिनीहरू बन्डलहरूको मा संकलित फाइबर, फारम गर्न सक्छन्। तिनीहरूले एक मजबूत फ्रेम फारम सेल पर्खाल hemicelluloses र pectin - एक colloidal म्याट्रिक्स पनि कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप बनेको छ जसमा -depth। साथै, सेलूलोज अक्सर बिरुवाहरु को अन्य भागहरु मा फेला, उदाहरणको लागि, 99% को कपास फाइबर शुद्ध सेलूलोज, सन र सन समावेश काठ को 75-80% को राशि मा समावेश - 55% सम्म। पहिले उल्लेख गरिएको थियो रूपमा, सेल झिल्ली को समारोह जो यो प्रवेश ऊतक गर्न जीव कारण छन्।
सेलूलोज बाहेक पर्खाल प्रोटीन, lipids र अकार्बनिक सामाग्री समावेश गर्दछ। उदाहरणका लागि, उच्च बिरुवाहरु को सेल पर्खालहरु मा spore - horsetails - समावेश सिलिकन डाइअक्साइड, त्यसैले बोट नै धेरै कठोर र टिकाउ छ र खाने को नालायक पशु छ। पत्रहरु बारहमासी बिरुवाहरु र भनिन्छ डाट को स्टेम गठन को एक, गोले बोसो-जस्तो पदार्थ मा accumulates - suberin। फलस्वरूप, यस cytoplasm र यसको organelles बिखर र कक्षहरू आफूलाई मात्र समर्थन गर्ने कार्य (oprobkovevanie स्टेम) प्रदर्शन गर्न सक्छन्।
यदि यो बालाको यांत्रिक बल कारण कोलोरेसन् काठ बढाउँछ संग र वुडी प्रजाति को बिरुवाहरु को stems र lignin मा निहित Pigments, सेलूलोज फाइबर सँगै जम्मा बीच lignin, hemicellulose। पर्खाल पनि पदार्थ को परिवहन प्रदान जो pores एक झिल्ली संग लाइन, comprises।
संरचना र Fungi को सेल झिल्ली को समारोह
arthropods को बाहिरी कंकाल र केही जीवाणुहरु मा पनि पाइन्छ जो एक polysaccharide, - Fungi जग पर्खाल को विभिन्न समूह को प्रतिनिधिहरु chitin छ। Nadmembrannye परिसर Fungi पनि सेलूलोज र पशु स्टार्च समावेश - glycogen। glucan र mannan - उदाहरणका लागि, खमीर सेल पर्खाल को रासायनिक संरचना मुख्य रूप कार्बोहाइड्रेट प्रतिनिधित्व छ। पर्खाल तिनीहरूलाई देखि नै पर्याप्त बलियो छ र गरिबी जनावर को जठरांत्रिय पर्चा मा पचा लिया जान्छ, त्यसैले पोषक सजिलै उपलब्ध छैन र खमीर सानो आन्द्रा को epithelium अवशोषित छैन।
सेल झिल्ली protists मा अनुपस्थित छ भने, prokaryotes त्यसपछि यो एक धेरै जटिल संरचना, एक murein, lipoproteins र lipopolysaccharides र teichoic एसिड सहित छ। पर्खाल lipopolysaccharides, उदाहरणका लागि दाँत तामचीनी वा eukaryotes को झिल्ली गर्न, substrates को एक किसिम गर्न जीवाणुहरु को आसंजन बढाउँछ। तसर्थ, जीवाणुहरु को सेल पर्खाल र अझै antigenic गुण छ।
सबैभन्दा जीवाणुहरु शीर्ष पर्खाल कवर श्लेम लाग्एको दानाको (capsid), अर्को सुरक्षा तह स्थित सक्छ जो माथि - peplos। यसको संरचना आधारमा, जीवाणुतत्व सबै जीवाणुहरु ग्राम-सकारात्मक र ग्राम-नकारात्मक विभाजित छन्।
जीव रसायन संरचना द्वारा जीवाणुहरु को भिन्नता
विधि आफ्नो गोले को रासायनिक संरचना को विशेष मा prokaryotes भेद गर्न मद्दत गर्छ, यो डेनिस वैज्ञानिक जी ग्राम देर XIX शताब्दीमा द्वारा प्रस्तावित भएको थियो। उहाँले जीवाणुहरु केही प्रजाति दाग लागेको राम्रो हो कि फेला एनिलिन रंजक र स्थिर यौगिकहरु बैजनी रंग अप सेल झिल्ली बनाउन गठन।
यस्तो ग्राम सकारात्मक prokaryotes नाम गरिएको छ: उदाहरणका लागि, Staphylococcus र Streptococcus। ती सबै एन्टिबायोटिक रोगनाशक ओषधि र actinomycin एक नम्बरमा susceptible छन्। अन्य ब्याकटेरिया, ग्राम-नकारात्मक भनिन्छ, मिथाइल बैंगनी संग दाग छैन। तिनीहरूले एक ठोस कम permeability दानाको र सेल पर्खाल छ किनभने तिनीहरूले रोगनाशक ओषधि गर्न प्रतिरोधी हो। यी साल्मोनेला, Shigella, Helicobacter समावेश गर्नुहोस्। एक फरक रासायनिक संरचना छ जो जीवाणुहरु को सेल झिल्ली, औषधि विज्ञान र चिकित्सा लिपिबद्ध छन् जो एउटा महत्त्वपूर्ण microbiological विशेषताहरु छ।
mycoplasmas को सुविधाहरू
म्यकोप्लास्मा - हामीलाई धेरै सानो जीवाणुहरु को एक समूह मा बास गरौं। सूक्ष्म अध्ययन यो सेल झिल्ली, त्यसैले mycoplasmas यस्तो tetracycline रूपमा केही एन्टिबायोटिक, संवेदनशील तिनीहरूलाई मा अनुपस्थित छ कि देखाइएको थियो। Mycoplasmas व्यापक प्रकृतिका वितरण हुन्छ, मानव urogenital सिस्टम सहित धेरै रोगहरु, को causative एजेन्ट छन्।
आफ्नो चयापचय सबैभन्दा म्यकोप्लास्मा अक्सिजन प्रयोग गर्न आवश्यक र सख्त aerobes छन् छ। परजीवी मानिसहरूलाई र स्तनधारी रूपमा, तिनीहरूले सेल को संरचना mycoplasmas को विकास र प्रजनन को लागि एक अनुकूल सब्सट्रेट छ कोलेस्ट्रल को उपस्थिति, झिल्ली जस्तै, तेजी गुणन।
साधारण मा मिलाइएको
पहिले हामी सेल झिल्ली उदाहरणका लागि ciliates र अन्य एकल-celled जनावर, rhizopods मा अनुपस्थित छ भन्ने तथ्यलाई उल्लेख गरे। वृद्धि, प्रजनन, पोषण, श्वसन, excretion: Zoologists protista सबै कार्यहरु छ जो पूरा पशु जीव छन् फेला पारेका। यसबाहेक, जलीय वातावरण वा नम माटो मा वासस्थान, जो pores मार्फत बाह्य वातावरण र पृथक प्लाज्मा झिल्ली हो चयापचय उत्पादनहरु स्वामित्व पानी र खनिज लवण, को पातलो झिल्ली परिवहन मार्फत प्रदर्शन protists। त्यसैले, कुनै जटिल unicellular जनावर nadmembrannyh परिसर परिवेश अवस्था को सुविधाहरूमा idioadaptatsy हुन्छ।
denser बाहिरी तह एक्टोप्लाज्म - रक्षा र खोल protozoa को निष्ठा संरक्षण गर्न pelikulu छ। लोच र स्थायित्व भएको कारण pelikule जनावर शरीर स्थिर आकार कायम छ।
यो कागज मा, सेल झिल्ली को संरचना र रासायनिक संरचना विशेषता अध्ययन गरिएको छ बिरूवा कक्षहरूको जीव को, साथै जीवाणुहरु र Fungi।
समतल र राउन्ड कीडे को समानता के हुन्? समतल र राउन्ड कीडे को तुलनात्मक विशेषताहरु
कक्षहरूको बाहिरी तह। जीव: संयंत्र सेल को संरचना, क्षेत्रीय
क्षेत्र के हो र यो जिल्ला र क्षेत्रबाट अलग कसरी
निबंध "दया र कृपा के हो"
दुनिया मा saltiest ताल। संसारको सबै भन्दा ठूलो नुन ताल
संसारको नक्शा। कार्ड को प्रकार
मीडिया लाइब्रेरी iCloud के हो? को iCloud लाइब्रेरी कसरी असक्षम?
कारण र dandruff को उपचार
दूध संग कस्तार्ड प्यानकेकहरू। दूध संग कस्टर्ड प्यानकेकहरू लागि नुस्खा
केटाहरू लागि डिजाइनर - भविष्यमा विश्व, सुनको हात गर्न subservient
शिशुहरू एक रूघाँ कस्तो व्यवहार गर्ने? फार्मेसी लागूपदार्थ र परम्परागत चिकित्सा
संग्रहालय क्रिसमस ट्री खिलौने "Klinskoe कम्पाउन्ड": समीक्षा, फोटो
व्यवसायीक र रोचक विचार को सिफारिसहरू बाल विचारै,: केश के गर्न
अमेरिकी वित्तीय प्रणाली
फ्रान्स, नेपोलियन III को पत्नी को महारानी Eugenia: जीवनी
एक सज्जन गरेको मर्यादा: अभिनेता र भूमिकाको, को श्रृंखला षड्यन्त्र
बोर्ड: नियुक्ति र विनिर्माण
बेचैन खुट्टा सिंड्रोम - खराब राज्य उपचार